Bahlangulwa Beza Kuzibulala
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiArabhu IsiArmenia IsiArmenia (saseNtshona) IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiChichewa IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiFante IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKannada IsiKinyarwanda IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMarathi IsiNgesi IsiNorway IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiRarotonga IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTarascan IsiTigrinya IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTzeltal IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUmbundu IsiUrdu IsiValencian IsiXhosa IsiZapotec (saseLachiguiri) IsiZulu
NGOXA ayeshumayela kwindlu ngendlu, amaNgqina kaYehova amabini ankqonkqoza komnye umzi. Kwavula indoda eyayibonakala isentlungwini; emva kwayo kujinga intambo.
Emva kokuba iwangenise ngaphakathi loo maNgqina, abuza ukuba intambo le ijinga apha yeyantoni. Yathi ibisele iza kuzixhoma, kodwa yacinga ukuba mayiye kuwuvula okokugqibela umnyango. AmaNgqina athetha nale ndoda aza ayisa kugqirha owayincedayo.
Eli bali lalikwiphephandaba laseBelgium. Noko ke, amaNgqina kaYehova ayengaqali ukunceda umntu obefuna ukuzibulala. Nanga amanye amabali afana neli awenzeka kwamanye amazwe ehlabathi.
Elinye ibhinqa laseGrisi labhala lenjenje: “ Intliziyo yam yaba lihlwili yinto endayenziwa ngumyeni wam ndaza ndakhathazeka ngokwenene. Intlungu endandikuyo yandenza andacinga ngenye into ngaphandle kokuzibulala. Loo ngcinga nje iyodwa yandenza ndaphola engqondweni—Ndandifuna ukwahlukana nentlungu endandikuyo. ”
Kunokuba lizibulale, eli bhinqa laya kugqirha. Kungekudala emva koko, ladibana namaNgqina, laqalisa ukufunda iBhayibhile laza laya kwiintlanganiso. Labhala: “ Abazalwana noodade bandithanda ngokusuk’ entliziyweni, nto leyo ebendiyifuna kuyo yonke le minyaka. Ndifumene abahlobo bokwenene endinokubathemba. Ndizolile yaye ndonwabile, andizikhathazi ngekamva. ”
INgqina laseNgilani labhala lathi: “ Omnye endisebenza naye wandifowunela evakala ukuba usentlungwini endixelela ukuba ngobo busuku uza kuzibulala. Ndisebenzisa iingongoma ezikuVukani! kaMeyi 2008 owayethetha ngokuzibulala, ndazama ukumbonisa, ndimfundela nezibhalo ezithuthuzelayo. Ngoku nakubeni iingxaki zisekho, kodwa akacingi ngokuzibulala. ”
UMichael, iNgqina likaYehova laseGhana, wancokola nebhinqa eliselula elithengisa apho aphangela khona. Ngenye imini, uMichael waphawula ukuba lidandatheke kakhulu waza wabuza isizathu.
Lathi belifuna ukuzibulala kuba umyeni walo ulilahlile wathandana nelinye ibhinqa. UMichael walithuthuzela waza walinika iincwadi ezimbini ezicacisa iZibhalo. Ngenxa yenkcazelo elayifumana kwezo ncwadi layeka ukufuna ukuzibulala. Alizange liyeke ukufunda iBhayibhile, ibe ngoku liNgqina likaYehova.
Iphephandaba laseUnited States lithi elinye iNgqina eliselula elalishumayela labona imoto imile kodwa injini yayo iduma.
Lo mafana uthi: “Ndabona umbhobho ozii-intshi ezine ufakwe kwi-exhaust pipe. Elinye icala lalo mbhobho lalifakwe kwifestile yemoto, eyayivalwe ngeteyiphu yokuncamathisela ukuze kungangeni moya.
“Njengoko ndandisondela kule moto, ndajonga efestileni ndaza ndabona ibhinqa likhala yaye kukho umsi ngaphakathi emotweni. Ndakhwaza ndisithi ‘Wenza ntoni?’
“Ndathi xa ndiza kuvula ucango, ndabona abantwana abathathu behleli ngasemva. Xa ndiluvula lathi: ‘Ndiyeke ndihambe! Ndimele ndihambe! Ndimele ndihambe nabantwana bam.’
“Ndathi, ‘Nceda ungayenzi le nto, asiyondlela yokucombulula ingxaki le!’
“Lathi: ‘Ndimele ndiy’ ezulwini, ndihambe nabantwana bam.’
“Njengoko lalikhala ndaguqa ngamadolo, nam ndisezinyembezini. Ndaphida ndathi, ‘Nceda ungayenzi le nto.’ Emva koko ndakwazi ukuvula ucango ndaza ndalanga, yaye ndalikhuphela ngaphandle.
“Lakhwaza lisithi, ‘Hlangula abantwana bam!’
“Basondeza iingalo zabo. Yayingamantombazana amabini aneminyaka emine nemihlanu kunye nenkwenkwana eneminyaka emibini. Babehleli ngasemva bethe cwaka, bengazi ukuba bazakufa kungekudala.
“Emva kokuba ndibakhuphe bonke, ndacima injini. Sobahlanu sahlala elityeni, ndaza ndathi, ‘Masithethe.’”
KumaNgqina kaYehova, ubomi busisipho esixabisekileyo esivela kuMdali wethu. Ehlabathini lonke azama ukuthuthuzela abo banabantu babo ababathandayo abaye bazibulala nokunceda abo bakhe bazama ukuzibulala.
Yintoni enokubangela umntu ajonge ukufa njengomhlobo?